Aqoonkaab Maxaad Uga Baahantahay Inaad ka Ogaato Caabuqa(Infection)-ka.? | Aqoonkaab
Jan 24, 2019Caafimaadka
Caabuqu (Infection) waxa uu dhacaa marka noole debada ka yimi (foreign organism) uu soo galo jidhka qofka kuna sababo dhibaato,noolahaasi wuxuu u ka helaa nafaqada qofkaas jirkiisa si uu mudo badan usii noolaado, una tarmo , ka dibna uu qabsado qaybo ka mid ah jidhka qofkaas.
Caabuqa ayaa lagu kala qaadi karaa siyaabo kala duwan. waxaa ka mid ah taabashada Maqaarka Qof qaba xanunka, dheecaan jidheedka Qofka , la xiriiridda saxarada , qaybaha hawada ka soo baxay Qof kale oo aad neefqadato , iyo walax shaybaadh sida irbad oo qofka cudurka qaba taabtay.
Waxaa jira trillions nooc oo ka mid ah bakteeriyada, dhowr nooc oo ka mid ah ayaana cudurada ku keena Aadanaha. Qaar ka mid ah bakteerutadu waxay ku nool yihiin gudaha jidhka bini’aadamka iyadoon dhibaato loo geysan Waxaana loo yaqaan bacteeriya Wanaagsan (Good Bacteria ), tusaale ahaan mindhicirka ama marinnada hawada. Qaar ka mid ah bakteeriyada “wanaagsan” waxay weeraraan bakteeriyada “xun” waxaanay ka hortagi karaan inay keenan cuduro.
Jirku wuxuu sida caadiga ah leeyahay qaar ka mid ah bakteeriyada “wanaagsan” oo kaa caawin in ay joogteeyaan dheelitirka shaqada ee mindhicirrada, afka, Xubnaha taranka dumarka , iyo qaybaha kale ee jidhka ah .
Haddii bakteeriyada “wanaagsan” Ee dadka ku nool la wada baabbi’iyey, tusaale ahaan, iyadoo aad loo isticmaalayo Daawooyin antibiotics ah oo adan waqti dheer , fangaska waa ay kori koraan waxaanay keeeni karaan dhibaatooyin caafimaad.
Dr. Abdirashid Mohamed
Previous PostWadne Istaag Next PostHypothyroidism-Cudur Haweenka Soomaalida Ku Badan